समाचार चितवनमा ९५ जना उम्मेदवार, महिला ८ जनामात्र
Ujyaalo शुक्रवार, मंसिर ८, २०७४ ००:४४:००
चितवन, मंसिर ७ – चितवनमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावको लागि ९५ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । जसमा महिला उम्मेदवार ८ जना मात्र रहेका छन् । प्रदेशसभाको ६ र प्रतिनिधिसभाको ३ क्षेत्र रहेको चितवनमा एमाले/माओवादी र कांग्रेस/राप्रपा दुवै गठवन्धनले महिला उम्मेदवार उठाएका छैनन् ।
चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका ८ जना महिला उम्मेदवारहरुमा एकजना स्वतन्त्र र सातजना विभिन्न दलहरुबाट रहेका छन् । प्रतिनिधिसभाका लागि २ जना र प्रदेश सभाका लागि ६ जना महिला उम्मेदवार रहेका छन् ।
१० जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा रहेको चितवन क्षेत्र नं. १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका महिला उम्मेदवारको संख्या शुन्य छ । प्रदेशसभाका लागि भने क्षेत्र नं. १ को (क) मा १० जना उम्मेदवार रहेकोमा नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीको तर्फबाट भवानीदेवी घिमिरे उम्मेदवार हुन् । त्यस्तै १० जना नै उम्मेदवार रहेको प्रदेश सभाको २ मा उठ्ने महिलामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट तुलसी सापकोटा छन् ।
चितवन क्षेत्र नं. २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि राष्ट्रिय जनता पार्टी, (राजपा) नेपालले रिता चौधरीलाई उम्मेदवारको रुपमा अगाडि सारेको छ । क्षेत्र नं. २ को प्रदेश सभा (क) मा एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी)ले बुद्धलक्ष्मी स्याङतानलाई उठाएको छ । क्षेत्र नं. २ कै प्रदेश सभा(ख)मा नेकपा (माले)ले सरस्वती शर्मा पौडेल र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मेनुका थापा मगरलाई उठाएको छ ।
६ जना स्वतन्त्रसहित १४ जना उम्मेदवार रहेका चितवनको क्षेत्र नं. ३ मा प्रतिनिधिसभाका महिला उम्मेदवार भगवती प्रसाई स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए । तर, ५ गते अयोजना गरिएको वाम गठबन्धनको सभामा उहाँले उम्मेदवारी सोही क्षेत्रमा उठ्नुभएको पुष्पकमल दहाललाई समर्थन गर्दै फिर्ता लिनुभएको छ ।
सातजना उम्मेदवार रहेको क्षेत्र नम्बर ३ को प्रदेश सभा (क) मा नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालले मक्कुमाया गुरुङलाई उठाएको छ । सोही क्षेत्रको प्रदेश(ख)मा सबै सातनजा पुरुष उम्मेदवार रहेका छन् ।
चितवनमा कुल मतदाता संख्या तीन लाख ५४ हजार ३६ रहेको छ । एकजना तेस्रो लिंगी, एक लाख ६९ हजार ९६७ पुरुष र एक लाख ८४ हजार ६८ महिला मतदाता छन् ।